Toerana tranokala an-tserasera italianina - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(234 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Ny Italiana ara-batana dia malaza noho ny fitiavany filokana sy risika, na izany aza, ny governemanta Italiana dia nanam-potoana handaminana ny karazana filokana sasany. Ny antony mahatonga ny fihetsika hentitra amin'ity faritra ity dia satria tamin'ny taona 90 ny ankamaroan'ny mponina dia tsy nankasitraka izany karazana fialamboly izany. Angamba izany dia noho ny filokana, maro no mifandray amin'ny Mafia. Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia niova ny zava-drehetra ary tato anatin'ny folo taona lasa dia nahita fitomboana haingana amin'ny lazan'ny filokana ny firenena.
Mariho ho an'ireo mpitsidika ny lahatahiry filokana amin'ny Internet fa ny maodely filokana ankehitriny any Italia dia mikendry ny hisorohana ny familiana vola mpilalao Italiana any ivelany. Mba hahafahana "manentsina" ny mponina ao an-toerana, izay handeha hilalao any ivelany, ny firenena filokana rehetra dia eo akaikin'ny sisintany miaraka amin'ireo fanjakana mifanila aminy.
Tamin'ny 2007, nalamina ara-dalàna ny lalao karatra mifototra amin'ny fahaiza-manao sy ny asa-tanana, ny fahefana farany sy ny karazana filokana ara-dalàna. Fikambanana ofisialy mifehy ny filokana any Italia ny AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), izay misahana ny fanaraha-maso sy ny fanomezana fahazoan-dàlana. Ny sazy noho ny fandikana ny lalàna dia mety tsy mitovy - manomboka amin'ny sazy ka hatramin'ny fanagadrana.
Lisitry ny Top Sites 10 Italiana Online Casino
Lalao an-tserasera amin'ny Italiana
Ny filokana an-tserasera any Italia dia avela amin'ny fomba ofisialy. Araka ny fanadihadiana isan-karazany, ny filokana amin'ny Internet dia iray amin'ireo endrika fialamboly italiana indrindra. Tsy mahagaga raha mitombo isan-taona ny vola miditra amin'ny filokana amin'ny Internet any Italia. Mandrak'androany, ny mpilalao italiana dia misokatra amin'ny fidirana amin'ireo tranokala filokana an-tserasera any Italia sy amin'ireo tranonkala filokana vahiny. Na izany aza, manara-maso akaiky sy mifehy ny hetsika ataon'izy ireo ny manampahefana. Araka ny lalàna momba ny filokana amin'ny Internet any Italia, ho an'ny fanomezana ny tolotra ataon'izy ireo manerana ny firenena, ny mpandraharaha rehetra dia takiana hahazoana fahazoan-dàlana manokana. Noho io politika io, ny indostrian'ny lalao italiana dia mitombo, mivoatra ary lasa manintona kokoa sy manintona an'ireo mpampiasa vola vahiny.
Ny tranonkala online casino manaiky ny mpilalao avy any Italia
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Italia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mamaky ny fanadihadinay momba ny tranonkalan'ny kazàny, mba hahafantaranao ny fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny Internet, bonus sy safidy azo vidiana ho an'ireo mpilalao Italiana.
Ny filokana any Italia
Ny dia CasinoToplists dia mitohy ary amin'ity indray mitoraka ity dia hijanona ao an-tranon'ilay teny hoe "casino" - any Italia milentika. Raha ny tantara no jerena dia antsoina hoe "casino" io filokana io, na dia ny Italiana aza dia "trano" fotsiny.
Famintinana ny lahatsoratra:
Italia - jeografia sy tantara fohifohy;
Ny fihetsika ara-tantara amin'ny filokana amin'ny fomba fijery ara-tantara avy amin'ny 1919 ka hatramin'izao;
Misy casino 5 eo amin'ny sisintanin'ny firenena;
satria afaka avela hilalao amin'ny casino ety anaty aterineto ny 2010.
Dimanjato dimy ao Roma renivohitra Italia misy adiresy;
Fampahalalana mahaliana momba ny firenena sy ny mponina ao aminy.
Toerana misy an'i Italia sy tantara ara-tantara fohy
Repoblika Italiana - dia zorony sariaka amin'ny Tontolo taloha, ny fihinanam-bahoaka ary tranombakoka malalaka.
Ny anarany malefaka an'ny firenena dia voaray avy amin'ireo mpifanolobodirindrina any Sipra, fa ny sandany dia tena azo ampiharina - ny firenena zanak'omby.
Izany dia noho ny hoe nandritra ny fotoana maharitra, dia io ombilahy io no mariky ny olona, ​​matetika no nanasokajy ny amboadia romanina.
Ny renivohitr'i Italia - Roma tsara tarehy, fo nilentika nanadino ny Fanjakana Romanina, ilay tanàna mandrakizay, izay niady ho an'ny olona maro. Androany dia misy olona 4 tapitrisa mahery, mpitsidika marobe. Roma dia nanjary cosmopolitan marina, misy vahiny tsara toetra ary manolotra fahafinaretana betsaka ho azy ireo. Fa ny isan'izy ireo dia tsy misy lalao filokana hilalao, tsy maintsy mandeha amin'ny legalisation ny sehatry ny orinasa. Misy ny vahiny, Roulette, Punto Banco, Blackjack ary lalao telopolo na efapolo, craps, Chemin de Fer, ary ny poker ankafizin'ny rehetra.
Mety ho fahafoizan-tena ny mandeha any Italia ho an'ny filokana fotsiny, satria mety misy, iray amin'ireo zava-mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao: trano mimanda, trano mimanda, tetezana, lapa, trano fisakafoanana, tanimboaloboka, teatra, tranombakoka ary maro hafa dia mahatalanjona fotsiny.
Casino sy filokana any Italia
Na dia tena tsy mitandrina aza ny Italiana, dia tsy tokony hosokafana hatreto amin'ny sehatry ny firenena ny trano filokana, salon, casino manokana ary na ny efitranon'ireo milina filokana aza. Na izany aza, trano filokana maro any Italia no.
Ny filokana sy ny italiana hijoro mandritra ny taonjato maro, mafana ny olona ary tia milalao, fa ny katolika kosa dia manana fihetsika ratsy manoloana ity fialamboly ity. Nanao komandy ny manam-pahefana ary nanala ara-dalàna ny ota ka nanomboka niaro ny tombontsoam-pirenena izy.
Fantatry ny governemanta tsara fa raha mandrara tanteraka ny filokana, dia hivoaka vola any amin'ireo trano filokana amin'ireo firenena mifanila aminy, izay tena tsy faniry mihitsy. Noho izany, hampihenana ny maripanan'ny mpilalao ary miaraka amin'izay hamenoana ny teti-bola, eo amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Slovenia, France, Suisse ary i Monte Carlo dia miasa trano filokana maro.
Ny totalin'i Italia dia miasa casino 5, fa tsy misy na dia iray akory aza ao Roma. Asa Lehibe Casino ao San Remo fifampiraharahana maniry hilalao ao Monaco na Frantsa, mankany azino any Campione eo amoron-dranon'i Lugano no mipetraka amin'ny sisintany amin'i Soisa, ny casino ao San Vincent manidy ny lalan'ny fandosirana mankany amin'ny tionelin'i Mont Blanc. A 2 dia manangana an'i Venise tsy hamela ny olona hiloka filokana ao Slovenia.
Hafahafa ihany, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, Italia dia marina tokoa, talohan'ny nilalaovan'ny filokana malalaka. Nandritra ny fotoana ela dia nijanona ilay casino Venetiana malaza "Ridotto".
Taorian'ny Ady lehibe voalohany, nanakatona governemanta 59 ny governemanta ary nanomboka nandrara mafy ny filokana nanomboka ny 1919. Saingy fantatr'i Mussolini ny fahasimban'ny politika toy izany ho an'ny tetibolam-panjakana, ka tamin'ny 1927, dia nanokatra ny trano ofisialy tao San Remo.
Ny Casino San Remo dia miorina amin'ny tranobe mahafinaritra, natao tamin'ny 1905 avy amin'i Eugene Ferret. Any amin'ny faritany monisipaly no misy azy. Nandritra ny fotoana ela dia io irery no trano filokana any Italia, ary teo izy, araka ny filazan'i Mussolini fotsiny ho fanamafisana ny lalàna.
Na izany aza, ny hetsika Italiana dia nitarika ny zava-misy fa tamin'ny 1933 dia nitokana ny Casino Campione d'italia. Izy io dia natsangana tamin'ny 1917 miaraka amina glamor manokana, mahazatra ny fotoanany. Ity dia tranobe goavambe lehibe ankehitriny no trano filokana lehibe indrindra any Eropa.
Tao amin'ny 1937, dia nalemy kely ny lalàna, navela hiditra tao Venice ny trano filokana filokana, saingy eto ambany ny fifehezan'ny tanàna.
Taorian'ny Ady Lehibe II niaro ny filokana, dia mbola miasa casino maromaro izy ireo, fa ny fanandramana rehetra hanitatra ny raharaham-barotra no resy.
Tena mahaliana dia ny tantaran'ny fahitana ny trano filokana faha-4 ao San Vincent, avo any Alpes. Any amin'ny faritra Valle d'Aosta no misy azy, izay misy kolontsaina mifamatotra mafy ao Frantsa sy Italia, ka i France tamin'ny 1947 tamin'ny referendum dia naniry ny hifikitra amin'ny faritany. Ny mponina ao San Vincent dia nametraka ny fepetra napetrak'i Roma fa hijanona ao Italia izy ireo rehefa hiseho ao amin'ilay trano filokana. Ary nivoha tamin'ny hafainganam-pandeha.
Fa ny tantaran'ny asan'ny casino italiana, na dia eo ambanin'ny fahefan'ny monisipaly aza, dia mahafantatra fotoana maizina be dia be. Fametahana azo antoka azo antoka ny mpiasa sy ny mpiasa ambony fitantanana. Ary tamin'ny 1983, dia mbola nahazo casino Saint Vincent sy Sanremo rohy miaraka amin'ny mafia. Taorian'ity orinasa henjana ity dia nanitsy sy nanova ny lalana.
Androany, ao amin'ny saikinosy Apennine dia miasa ny trano filokana 5, ary mbola ny tanàna ihany izy ireo, ny faritra dia mandray anjara amin'ny tetibola 70% amin'ny tombony azo avy amin'ny milina filokana, 50% - avy amin'ny lalao amerikana, 45% - avy amin'ny frantsay.
Na dia tsy handeha hampiasa ny casino aza ny governemanta Italiana, tamin'ny 2010 dia afaka nilalao tao amin'ny efitrano poker an-tserasera ny Italiana. Ny fanamaivanana toy izany dia nohamarinin'ny hetra an-jatony miliara azony tao amin'ny tetibola.
Ny tena mahavariana, na dia kely aza ny casino any Italia, sy ny eto an-drenivohitra tsy misy azy ireo mihitsy, dia lasa karazana mari-toerana sy mahasarika mpizahatany ireo toerana ireo. Trano fandraisam-bahiny misy interiors mahafinaritra dia efa hatry ny ela no toerana hanaovana hetsika sosialy, hetsi-bahoaka sy lehibe.
Coliseum. Adiresy: Piazza del Colosseo, 1. Izy io dia tandindon'i Roma taloha, ilay trano taloha mahatalanjona indrindra, izay mampiavaka ny renivohitra Italiana.
Trevi Fountain. Adiresy: Piazza di Trevi. Ilay loharano baroka mahafinaritra tamin'ny taonjato faha-26, noforonin'i Nicola Salvi, dia misy tilikambo eo ambonin'ny faritra Trevi, sahabo ho XNUMX metatra, misy fiatraikany amin'ny hatsarana sy hakantony.
Pantheon. Adiresy: Piazza della Rotonda. Ny ohatra tsara indrindra amin'ny maritrano romanina, ny haingo ivelany sy ny endrika anatiny manaitra.
Forum Romana. Adiresy: Via della Salaria Vecchia, 5/6. Ny ivon'ny fiainana ara-tsosialin'i Roma taloha dia manome fomba fijery tena tsara momba ny fiainana zato taona lasa izay.
Katedraly Masindahy Paul. Adiresy: Piazza San Pietro. Io no fiangonana kristiana lehibe indrindra eto an-tany ary ny firafitr'i Vatican mahavariana indrindra.
Zavatra mahaliana momba an'i Italia sy Italiana
Italia - ny fanjakana be mponina indrindra any Eropa.
98% ny mponina - Katolika.
Italia - ny toerana nahaterahan'ny antsasaky ny fromazy malaza.
Any Italie dia misy teboka roa: ny Vatican sy San Morino.
Any Italia, maherin'ny volkano noho ny firenena hafa any Eorôpa.
Italiana maoderina - fitenim-paritra Florentine, izay nalaza noho ny fisaorana an'i Dante.
Italia amin'ny sari-tany Eoropa
0.1 Lisitry ny Top Sites 10 Italiana Online Casino
2.1 Lalao an-tserasera amin'ny Italiana
2.2 Ny tranonkala online casino manaiky ny mpilalao avy any Italia
3 Ny filokana any Italia
3.0.1 Toerana misy an'i Italia sy tantara ara-tantara fohy
3.1 Casino sy filokana any Italia
3.1.2 Zavatra mahaliana momba an'i Italia sy Italiana
3.1.3 Italia amin'ny sari-tany Eoropa
grande vegas casino bonus code tsy misy petra-bola